Ingxaki 4: I-Acer Aspire One, ayithumeli kwi-Datashow-Geofumadas
Ingxaki 4: I-Acer Aspire One, musa ukuthumela kuDatashow
Epreli, 2010 egeomates My, Ezahlukeneyo
Kwimeko yeekhomputha Acer balangazelela, indibaniselwano yokuthumela umbono wescreen kwiprojektha kumhloli wangaphandle ikwindibaniselwano Fn + F5. Kungenzeka ukuba bangaphenduli, kwaye xa unabantu abangama-200 phambi kwakho, yingxaki enkulu.
Makhe sibone indlela yokusombulula ngayo.
Ukuba yonke into iyahlelwa
Esinye sezizathu eziphambili kukuba kuphela ngamaqhosha acinezelweyo, kwisitayile esinokwenziwa ngayo nayiphi na enye ilaptop kwaye sinoluvo lokuba akukho nto yenzekayo. Nokuba kungasetyenziswa amanye amaqhosha, ngamanye amaxesha yi-F5. Oonobumba abluhlaza kufuneka bacinezelwe Fn, ngoko F5, kodwa sukukhulula isitshixo somsebenzi de kuvele imenyu ejikelezayo evumela ukuba ukhethe into ofuna ukuyithumela kuyo:
I icon yokuqala kuthetha ukuba ayithumeli nantoni na, kwaye ngoko ukwenza ngokukhupha ikhiye yeFn ayenzi nto.
Okwesibini kuthumela ukubeka esweni okwesibini, kushiya umbono nakwilaptop. Ukungancedi kolu khetho kukuba awunakuba nesisombululo esiphezulu kunaleso sixhaswe lilaptop.
Owesithathu uthumela kuphela ekubekeni esweni okungaphandle. Oku kufanelekile, ukuba uneliso elibukhali kwaye ufuna ukuba nezigqibo eziphezulu ezingaxhaswanga lilaptop.
Igumbi lithumela kuphela kwi-projektha, kwisisombululo se-800 × 600
Ukuba kukho into ethe yacaciswa.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba umntu ogqwethayo uye waphula into ethile, ngokuqhelekileyo uthintele msconfig ukujonga ukuphucula isivinini sokuqalisa.
Ngenxa yoko, senza:
Qala> sebenzisa> msconfig> yamkela
Apha siya kwiTebhu yeKhaya, kwaye siqinisekisa inketho yeQtZgAcer. Siyisebenzisayo, ngoko sikhetha ukwamukela, inkqubo iya kufuna ukuqala kwakhona.
Emva kokuba umatshini uqaliswe kwakhona ingxaki ayifanele ibe khona kwakhona.
Xa siyiguqula le nto, sifumana umyalezo osikhumbuza ukuba sichukumise ubumbeko lokuqala. Kuya kufuneka sisebenzise ukhetho lokungasikhumbuli kwakhona.
Ezinye izizathu ezingaqhelekanga, kuya kufuneka zibone ukuba iprojekti ayixhunyiwe kwi-port efanelekileyo (ezinye zizisa ezimbini) okanye ukuba isiqingatha esipheleleyo kwaye sidinga ukuqalisa ukuqaphela umatshini.
Kwakhona kuhlala kusenzeka ukuba indibaniselwano yezitshixo ze-FN + F5 ayiziphakamisi ithebhu ukukhetha ukuhanjiswa; Ngokubanzi kwenzeka ngenxa yokuba umatshini ucinyiwe kwaye uqhubeke emva kokusebenzisa esweni yesibini okanye xa ukubek'esweni kwesithathu okunje nge-iPad kudityaniswe nesicelo se-Idisplay. Imveliso kukucofa ekunene kwidesktop kwaye ukhethe iipropathi, emva koko kwi-"uqwalaselo" isithuba, iliso ngalinye likhethiwe kwaye ukhetho "lwedesktop yedesktop" lwenziwe lwasebenza, emva koko wamkela.
Acer balangazelela iPad Office for ebulalayo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imisele ezivela polylines (Inyathelo 2)
Post Next Uqikelelo lweNdebe yeHlabathi yoMzantsi AfrikaOkulandelayo »
2 Iphendula "Ingxaki 4: I-Acer Aspire One, ayithumeli kuDatashow"
Ndiyabulela kakhulu !!!! kwisisombululo ... ibiyiyo !! Ububi bokufumana isantya esiphezulu kwiseshoni yokuqala buchaphazele inkqubo yoqikelelo lwedatha